Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » I-Kia Niro entsha yenza i-World Debut
I-Kia Corporation ibonakalise i-Niro entsha namhlanje okokuqala ngqa kwi-2021 Seoul Mobility Show, ejolise ekwenzeni ukuhamba okuzinzileyo kufikeleleke kumntu wonke.
I-Niro entsha iquka ukuzinikela kukaKia ekwakheni ikamva elizinzileyo. Njengenxalenye ebalulekileyo yomgca we-Kia okhulayo we-eco-friendly up, imodeli entsha iya kubhenela kwiimfuno ezinzima zabathengi abanozinzo.
Ihlaziywe ngokupheleleyo ukusuka emhlabeni ukuya phezulu, i-Niro entsha iphuhliswe phantsi kwefilosofi yoyilo yenkampani ye-Opposites United, ezalisekisa i-'Joy for Reason' ethos. Kuthatha ukuphefumlelwa kwindalo kungekuphela nje kuyilo kodwa nasekukhetheni umbala, impahla kunye nokugqiba ukubetha ulungelelwaniso olugqibeleleyo phakathi kwendlela enoxanduva lokusingqongileyo kunye nembono ejolise kwixesha elizayo.
Impembelelo eyomeleleyo yengqikelelo ye-Habaniro ka-2019 ibonakala kuyilo lwangaphandle lukaNiro kunye nokubonakala kwayo okunesitayile kunye nenkalipho kunye nobuchwepheshe obuphezulu bomzimba wethoni ezimbini. Intsika ebanzi ngasemva iphucula ukuhamba komoya ukuphucula i-aerodynamics kwaye idibanisa kwizibane zasemva ezimile okwe-boomerang.
Utyikityo lukaKia 'ubuso behlosi' luguqulelwe kwi-Niro entsha kwaye ngoku isuka kwi-hood, ukuya kuthi ga kwi-fender enqabileyo engezantsi. Uyilo lwangoku lwangaphambili lugqitywe 'ngokubetha kwentliziyo' LED DRL (izibane ezibaleka emini) ezidala ukuzithemba kunye nenkangeleko emangalisayo endleleni.